San Thitsa - Page2of 228 - Read Every Day
Zawgyi အောက်လမ်းနဲ့စီရင်ထားတဲ့အိမ်ကိုမသိဘဲဝယ်မိလိုက်သောသူ ဒီအ်မ်အဟောင်းကိုဝယ်မိတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာအိမ်ကိုဝယ်လက်စနဲ့ဝယ်ပြီပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပေးလိူလည်းမရတော့ပါဘူး ထူးဆန်းတာကဒီအိမ်ရဲ့အိမ်အောက်ထပ်မှာလက်ဝက်ကတ်တိုင်ကိုပြောင်းပြန်ချိတ်ဆွဲထားပြီးတော့ အောက်လမ်းနည်း ပညာတေနဲ့စီရင်ထားတဲ့အရိပ်ယောင်တွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် မြေအောက်ကြမ်းပြင်မှာဆိုရင်လည်းထူးဆန်းတဲ့အမှတ်သားတေနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့စာတေကိုရေးထိုးထားတာကိုတွေ့ရမှာ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတေအပြင်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့စာသားတေကိုလည်းနံရံနဲ့ ထုတ်တန်းတေမှာရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအိမ်မျိုးမှာအိပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုအဖြစ်ကိုသာတွေးကြည့်လိုက်ပါ ဘယ်လိုမှအိပ်ပျော်မှာတောငိမဟုတ်ပါဘူး အနည်းဆုံးအနားမှာတစ်ယောက်လောက်ရှိပြီးဖတ်အိပ်မှဘဲအိပ်ပျော်မှာဖြစ်ပါတယ် ခရက်ဒစ် unicode အောကျလမျးနဲ့စီရငျထားတဲ့အိမျကိုမသိဘဲဝယျမိလိုကျသောသူ ဒီအျမျအဟောငျးကိုဝယျမိတဲ့သူတဈယောကျဟာအိမျကိုဝယျလကျစနဲ့ဝယျပွီပွီဖွဈတဲ့အတှကျပွနျပေးလိူလညျးမရတော့ပါဘူး ထူးဆနျးတာကဒီအိမျရဲ့အိမျအောကျထပျမှာလကျဝကျကတျတိုငျကိုပွောငျးပွနျခြိတျဆှဲထားပွီးတော့ အောကျလမျးနညျး ပညာတနေဲ့စီရငျထားတဲ့အရိပျယောငျတှကေိုလညျးတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ မွအေောကျကွမျးပွငျမှာဆိုရငျလညျးထူးဆနျးတဲ့အမှတျသားတနေဲ့ ထူးဆနျးတဲ့စာတကေိုရေးထိုးထားတာကိုတှရေ့မှာ့ဖွဈပါတယျဒါတအေပွငျထိတျလနျ့စရာကောငျးတဲ့စာသားတကေိုလညျးနံရံနဲ့
အွန်လိုင်းပေါ်မှာပျံ့နေတဲ့ ပုစွန်ခြောက်လုပ်တဲ့ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ဝယ်စားဖို့စိုးရွံ့နေသူများအတွက် ပုစွန်ခြောက်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်း
Zawgyi အွန်လိုင်းပေါ်မှာပျံ့နေတဲ့ ပုစွန်ခြောက်လုပ်တဲ့ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ဝယ်စားဖို့စိုးရွံ့နေသူများအတွက် ပုစွန်ခြောက်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်း အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ပုစွန်ခြောက် ပြုလုပ်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ လူအတော်များများက ပုစွန်ခြောက်ကို ဝယ်စားဖို့ စိုးရွံ့နေကြပါတယ်။ ပုစွန်ခြောက်
အသက်အရွယ် အိုမင်းနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဝမ်းရေးအတွက် ကလေးကားစရာ ဂျင်လေးတွေ ရောင်းနေရတဲ့ အဘိုး
Zawgyi အသက်အရွယ် အိုမင်းနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဝမ်းရေးအတွက် ကလေးကားစရာ ဂျင်လေးတွေ ရောင်းနေရတဲ့ အဘိုး ဒီနေ့ ဆူးလေ square နားကကားမှတျတိုငျမှာကားwaitရငျးအဲ့အဖိုးကျိုတှေ့လို့ အားပေးဖို့မေးကွညျ့လိုကျတော့ အဖိုးကဈေးဦးမပေါကျသေးဘူးပွောတယျ အာ့နဲ့kueကလဲတခုအားပေးလိုက်တော့အဖိုးတော်တော်လေးပျော်သွားတယ်…အသက်ကြီးပီးဝမ်းစာအတွက်အဝေးကြီးကနေလာရောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတယ်… အိမ်ပြန်တော့လက်ထဲပိုက်ဆံကလဲနည်းနည်းဘဲပါတော့ ပါတာလေးဘာထက်လှူတော့အဖိုးကအရမ်းဝမ်းသာပီးဆုတွေလဲပေး မျက်ရည်လေးကလဲဝဲလို့အိမ်မှာကလေးတွေရှိလားမေးပီး သူရောင်းတဲ့ဂျင်လေးတွေဘာပြန်ထည့်ပေးရှာတာသမီးလေးလှူတဲ့ပိုက်ဆံကိုအဖိုးမနက်ဖြန်တရားစခန်းမှာလှူရင်းဆုတွေအများရီးတောင်းပေးခဲ့မရ်တဲ့… အဖိုးမှာတော်တော်လေးပျော်ပီးkueနဲ့စကားတွေပြောရင်းပစ္စည်းလေးတွေသိမ်းပီး
နေအိမ်ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ချီး ထိုင်ယိုထားခဲ့ပြီး သေတ္တာနှစ်လုံးနဲ့ ရွှေထည် သိန်း(၂၀၀) ဖိုးခိုးယူသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
Zawgyi နေအိမ်ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ချီး ထိုင်ယိုထားခဲ့ပြီး သေတ္တာနှစ်လုံးနဲ့ ရွှေထည် သိန်း(၂၀၀) ဖိုးခိုးယူသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် တနိုင်းမြို့ ဆင်မ်ဆာ့ရပ်ကွက် ချောင်းတဖက်ကမ်းရှိ ဒိုးလေး ဆီဆိုင် ဦးအောင်တိုး၏နေအိမ်အား ယမန်နံနက် (၃း၃၀)ချိန်ခန့်က နေအိမ်တံခါးအား ကလန့်ဖွင့်၍ ဦးအောင်တိုး
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ပျားရည်ဆေးနည်းအကြောင်
Zawgyi နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ပျားရည်ဆေးနည်းအကြောင်း (မယုံကြည်သူများအနေနဲ့ လုံးဝ လုပ်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးနော်..) မယုံကြည်သူများအနေနဲ့ လုံးဝ လုပ်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးနော်။ ယုံကြည်သူများအနေနဲ့လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ သဘာဝဆေးလေးမို့ ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ပျားရည်ဆေးနည်းအကြောင်းလေးပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။“ကျမသောက်နေပါတယ်
တကယ်ကို အဆန်းကြီး အသစ်ထွင်လိုက်ပြန်တဲ့ လူကိုယ်တိုင်ဝင်စိမ်ပြီး စားလို့ရတဲ့ ဟော့ပေါ့ ရေကူးကန်
Zawgyi တကယ်ကို အဆန်းကြီး အသစ်ထွင်လိုက်ပြန်တဲ့ လူကိုယ်တိုင်ဝင်စိမ်ပြီး စားလို့ရတဲ့ ဟော့ပေါ့ ရေကူးကန် လူကိုယ်တိုင်ဝင်စိမ်ပြီး စားလို့ရတဲ့ ဟော့ပေါ့ ရေကူးကန် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် (Lunar New Year) အကြိုအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟန်ကျိုးမြို့ရှိ ဟော်တယ်တစ်ခုတွင်
စိန်တူးဖော်ရေမိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခု၌ အသားစားသတ္တဝါခပ်ဆိုးဆိုး ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိပ်အသစ် အလောင်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိ
Zawgyi စိန်တူးဖော်ရေမိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခု၌ ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိပ်အသစ်အလောင်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရ ရုရှားနိုင်ငံ၊ Udachny ပြည်နယ်မှာ၊ Siberia ဒေသမှာ အခြေစိုက်တဲ့ စိန်တူးဖော်ရေးမိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုက လုပ်သားတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင် ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိပ်သစ်လို့ ယူဆရတဲ့ တိရစ္ဆာန်အကောင်သေ အလောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှဲယူထားပြီး တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ သင့်အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ မရှိတော့ပါ (သိကြားမင်း ဂါထာတော်)
Zawgyi ရှဲယူထားပြီး တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ သင့်အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ မရှိတော့ပါ (သိကြားမင်း ဂါထာတော်) တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင်ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါလား…
“သူ့လို ဆိုင်ရှင်မျိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်တော်ရှားပါတယ်. . .တကယ်ကို လေးစား. . .အားကျဖို့ကောင်းပါတယ်. .”
Zawgyi “သူ့လို ဆိုင်ရှင်မျိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်တော်ရှားပါတယ်. . .တကယ်ကို လေးစား. . .အားကျဖို့ကောင်းပါတယ်. .” ဒီနေ့ တင်ပြပေးချင်တာကတော့ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အရမ်းကောင်းလွန်းတဲ့ ရတနာဆိုင် တစ်ဆိုင်အကြောင်း တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် “လှမြတ်သူစိန်ရတနာဆိုင်
မန်းရွှေစက်တော် အထက်စက်တော်ရာတွင် နာရီပေါင်းများစွာကျောက်ရုပ်ကဲ့သို့ မလှုပ်မရှက် ဘုရားဖူးနေတဲ့ ရသေ့ကြီး(ရုပ်သံ)
zawgyi မန်းရွှေစက်တော် အထက်စက်တော်ရာတွင် နာရီပေါင်းများစွာကျောက်ရုပ်ကဲ့သို့ မလှုပ်မရှက် ဘုရားဖူးနေတဲ့ ရသေ့ကြီး(ရုပ်သံ) အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံ ကြည့်ရန် မန်းရွှေစက်တော် အထက်စက်တော်ရာအားလာရောက်ဖူးမျှော်နေသော ရသေ့တစ်ပါး ရုပ်ထုလို့ထင်မှတ်ကြရသည် ဘယ်လိုဈာန်မျိုးနဲ့ ဖူးမျှော်နေလဲမသိပါ ဘုရားဖူးပြည်သူများကလည်း ကြည်ညိုစွာဖြင့် ဖူးမျော်ကန်တော့နေပုံကို အောက်ပါvideoတွင်